Ny Tanjona dia mba hahazoan’ny mpiasa tsirairay fiahiana ara-tsosialy izay zo fototra maha olona. Orinasa am-polony no nanaovan’ny minisiteran’ny Asa sy ny CNaPS fitsidihana tampoka tao Fianarantsoa renivohitry ny Faritra Matsiatra Ambony. Delegasionina mafonja avy amin’ny talem-paritry ny asa sy ny lalàna sosialy, notarihin’ny taleny, Atoa Razafimahatratra niaraka tamin’ny delegasionina CNaPS notarihin’Atoa Rakotondradano Hanitry Ny Aina mpandrindra ny tetikasa eo anivon’ny CNaPS foibe no nanatanteraka izany tamina orinasa sy tranombarotra am-polony tao Fianarantsoa nandritra ny telo andro. Ankoatra ny fidinana ifotony dia nisy ihany koa ny fanofanana nomena ny mpiasa sy ny mpampiasa tany Matsiatra ambony. « Ny Task Force izay tarihin’ny minisiteran’ny Asa miaraka amin’ny CNaPS dia manao fanentanana ny orinasa rehetra mba hanambara ny mpiasa rehetra eny amin’ny CNaPS sy ny hanomezany azy ireo ihany koa ny SMIE (Service Médical Inter-entreprises) mba ahatongavana amin’izay hoe asa mendrika hapetraka eto Madagasikara izay. Ny mpiasa sy ny mpampiasa dia anaovanay fantenana avokoa. Apetraka ihany koa ny fifanatonana mba hisian’ny fifampiresahana eo amin’ny roa tonta », hoy ny fanazavan’ireo tompon’andraikitra. Ho an’ny “Task Force” moa dia tsy fanasaziana avy hatrany no ataon’izy ireo fa mbola fampahafantarana ny lalàna manoloana ny tsirambina ataon’ny mpampiasa. Fa ho avy kosa ny sazy amin’ny fiatombohan’ny enim-bolana faharoa ny taona 2019 ity rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna na toy inona na toy inona endrika isehoany, hoy ireo mpitarika ny “task force”.